Doofaar - Wikipedia
Doofaar waa Xayawaan ku nool Aduunka. Dofaarka woo kala duwan yahay. mid waxaa jiro oo Doofaar duureed ah, oo Miciyo leh, jirkiisa neh woo Madowyahay, midneh miciyo malahan, jirkiisa neh waa Gaduud biyo biyo ah.
Dofaarka Gaalada, ayaa cuno,gaar ahaan dadka Yurubiyanka ah, ayaga oo hilibkiisa cunaan, Maqaarkiisa neh dharka ku sameestaan, subagiisa neh waxee ku daraan Jalaatada iyo Jibsiga ama bataatiga la shiilay.. Dofarka waa xayawaanka kaliya oo ilaheey xaaraan uuga dhigay umada muslimiinta, xayawaankaan oo la taaban karin, oo hilibkiisa neh la cuni karin.
Doofaarka ilmo badan oo dhalaa, asiga oo xabadka ku leh, Naaso aad u badan, oo ilmo badan halmar nuujikaro.doofaarka saxaradiisa ayaa meel ka duwan noolaha ayey martee taas oo ku abuureysa jermiska an go,in ama aan la dabargooynkarin.ha waa xayawan aad nacas u aha. sidoo kale waxa way wax ku draan micnahah doofaarka saliidiisa ama xaytiisa waxaa ka mid ah rootiyada caanaha.
Xayawaankan waxa laga helaa meelo badan oo dunida kamid ah xataa doofaarka qaar ama nooc ayaa kunool somalia iyo wadamada Afrika.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Doofaar&oldid=227911"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 4 Jannaayo 2022, marka ee eheed 13:31.